समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिदै, कुन दलको कति सिट ? – Setosurya
समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिदै, कुन दलको कति सिट ?
बिहीबार २५, माघ २०७४
निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएसँगै आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।
आयोगले आजै सिटबाँडफाँड गरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सदस्य सिफारिसका लागि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। दलहरुले पठाएको सूचीमा कुनै परिमार्जन आवश्यक भएमा थप दुई दिन समय दिइने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।
अबको पाँच दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोगको तयारी आयोगको छ। मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकको मतगणना पुस २ गते नै सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न नभई आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
समानुपातिकका एमाले र कांग्रेसबीच ४५ हजार १०५ मतको अन्तर छ। तर उपलब्ध ११० सिट संख्या विभाजन गर्दा भने दुई दलको अन्तर एक सिटमात्र हुनेछ। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले थ्रेसहोल्ड कटाउँदै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन्।
प्राप्त मत अनुसार एमालेले ४१ सिट पाउँनेछ। कांग्रेसले ४० सिट तथा माओवादीले १७ सिट पाएको छ। मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम दुवैले ६र६ सिट पाएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकको ४१ सिट जोड्दा १२१ सिट पुर्याटएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। एकल बहुमतका लागि एमालेलाई १७ सिट अपुग छ।
कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र जितेर तेस्रो पार्टी भए पनि समानुपातिकतर्फ जितेको ४० सिट जोडेर दोस्रो दल बन्न सफल भएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको कूल ६३ सिट पुग्नेछ।
माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ जोडेर कूल संख्या ५३ पुर्यायएको छ। वाम गठबन्धनको कूल सिट १७४ पुगेको छ जुन दुई तिहाईभन्दा १० सिटले कम हो।
मधेसकेन्द्रित दुई दलमध्ये राजपाले प्रत्यक्षमा ११ सिट र समानुपातिकमा ६ सिट गरी कूल १७ सिट पाएको छ। संघीय समाजवादी फोरमले भने प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकमा ६ गरी १६ सिट पाएको छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र एक, राप्रपा एक, नयाँ शक्ति पार्टी एक, नेमकिपा एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट रहेको छ।
यस्ता छन् नेपाल टेलिकमका १३ आकर्षक अफर
अब कसरी अघि बढ्लान देउवा ? यस्ता छन् दुई विकल्प
नेकपाको नामबाट अण्डरलाईन हटाईने ! यस्तो जुर्दै छ नयाँ नाम !
पर्वत काँग्रेसमा पौडेल पक्षधरलाई पाखा लगाउँदै देउबा समूह, यस्तो छ टिकट बाँडफाँडको तयारी
निर्वाचन घोषणापछि सङ्ख्या पुनरावलोकन धाँधलीपूर्ण: अध्यक्ष ओली
टुँडिखेलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे कुलमानको प्रशंसा
मुख्यमन्त्री र राष्ट्रियसभा सदस्य छान्न एमाले र माओवादीले बनाए यस्तो मापदण्ड, के-के छन् ?
यस्तो छ बाम गठबन्धनको भित्रि रहस्य, निर्वाचन पछि हुँदैछ यस्तो
किन गरे रामचन्द्र पौडेल र कोइराला समूहद्धारा सपथ समारोह नै बहिस्कार ?
देउवाकै गृह जिल्लामा पुगेर ओलीले दिए यस्तो चुनौती – सक्लान् त देउवाले ओलीको चुनौती सामना गर्न ?
जीप दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु
नौ दलको मोटरसाईकल र्‍यालीमा हजारौँको सहभागिता (हेर्नुहोस् पाँच तस्बिर)
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले निकम्मा भनेपछि……..
प्रधानमन्त्री दाहालले दोहोर्‍याए, ‘संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता हुन्न’
देश भरका स्थानीय तहले पाउने भए एक/एक करोड रुपैयाँ अनुदान
प्रचण्डले भनेः नेपालमा फेरी द्वन्द्व हुनसक्छ !
चुनावको मुखैमा मधेसबाट एमालेमा को–को प्रवेश गरे?
कसरी लाग्यो पर्वतमा निर्माणाधिन तल्लो मोदी आयोजनामा आगलागी ? आयोजनाको लापरबाही ……….
‘दुई वटा गठबन्धनबीच चुनाव भए यस्तो हुनेछ टक्कर
कांग्रेस ठेगान लगाउने वाम गठबन्धनको ‘प्लान बी’
शंशोधनको नाउँमा सरकारले एक सिटे दलका पछि लागेर तमासा देखाउँदै छ – ओली
राष्ट्रपतिकी छोरीको बिहेमा पूर्व राजलाई निम्तो
जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको भ्रमण सकेका मोदीले के लेखे आफ्नो ट्वीटरमा………